I-Great Wall View Courtyard e-Badaling - I-Airbnb
I-Great Wall View Courtyard e-Badaling
Ikamelo e-ikhaya elakhelwe ngaphansi komhlaba ibungazwe ngu-认证手机用户0053
Ikamelo ngalinye liklanywe njengenkundla, ukuqoqwa komndeni, kanye nezindawo zokuphumula zezinkampani yizinketho zakho ezinhle kakhulu. Hlala kokokuzithokozisa kohambo oluzungezile.
Igceke langasese, lizungeze i-Great Wall, iqhwa ebusika
Impilo edolobheni ayinasithukuthezi, ngifuna ikakhulukazi ukuthola indawo ethulile futhi enhle, ngibona i-Great Wall ngemuva, inkundla encane nakanjani iwukukhetha kwakho, ukuhlala egcekeni udla, ukuphuza, ukuxoxa, ukuzulazula, ukujabulela igceke elincane.
Ukuze unikeze zonke izivakashi kangcono ukuphumula nenkululeko, uma ungadingi isevisi, umnakekeli wendlu ngeke akuphazamise. Uma udinga noma yini, shayela ucingo noma uye edeskini elingaphambili, umsizi wendlu uzokulungisa ngokushesha! Isikhathi sesevisi sifika ngemibuzo!
Ukuze unikeze zonke izivakashi kangcono ukuphumula nenkululeko, uma ungadingi isevisi, umnakekeli wendlu ngeke akuphazamise. Uma udinga noma yini, shayela ucingo noma uye edeskini…